Ngesikhathi esinzima esikhathini se-COVID-19, yini esingayenza ukuze sizivikele thina nabathandekayo bethu? Ngaphandle kokugqoka imaski yobuso lapho uphuma futhi ugeza izandla kaningi, ukuvivinya umzimba okwengeziwe futhi uthuthukise amasosha omzimba wethu kungaba enye inketho enhle. Kodwa-ke, abantu banendawo elinganiselwe futhi bahlomise imfanelo ...
Ukulwa Nobhubhane Lokhiye Bezikhiye Zase-PVC
I-Soft PVC keychain ingenye yezinto ezithandwa kakhulu ukunikela ngebhizinisi lakho, inhlangano noma umcimbi. Ungase uzibuze ukuthi isivinini esincane esincanyana esithambile se-PVC sisakaza kanjani ezentengiso, lapho abantu bekufaka esikhwameni sabo semali, esikhwameni semali, okhiye, izimoto, izikhwama, iselula, konke kuyenzeka ...
Izinhlobo ezahlukahlukene zezesekeli zemaski, ziphephile futhi zikhululekile ukugqoka
Amaski obuso ngokushesha abe yisidingo sansuku zonke ngo-2020, kanti i-COVID-19 ibonga kakhulu ngokutholwa kwabo okusha. Uma imaski inguRegina Georges wokugqoka kwansuku zonke, khona-ke izesekeli zemaski zizoba yiGretchen Wienerses noKaren Smiths weCoronavirus Preventio ...
Imaski Yobuso Bentengo Ngentengo Ephansi
Izimaski zobuso manje ziyingxenye yempilo yethu yansuku zonke, sifuna ukuzivikela & nabathandekayo bakho futhi wakhe amaski obuso ngokwezifiso ukwenza isitatimende semfashini, uguqule isitayela sakho usuku nosuku? Ngiyajabula ukusho ukuthi uza kumhlinzeki ofanele okwazi ukuklama imaski yakho yobuso ...
I-Multi-functional Wireless Charging Disinfection Box & i-UV Isibani Sokubulala Amagciwane
Wake wakhathazeka ngokuthi ungazigcina kanjani uhlanzekile futhi unempilo, ikakhulukazi ku-COVID -19? Izinto zethu ezintsha zingasiza ukuxazulula puzzle zakho. Kunezinhlobo ezahlukahlukene zezinto zokulwa ne-coronavirus. Sizonikezela ngemisebenzi eminingi engenantambo yokushaja / yokubulala amagciwane ibhokisi ne-UV disinfectio ...
I-Face Mask Lanyards Nemigexo Yizo Izesekeli Ozidingayo
Ukugqoka isifihla-buso esivikelayo manje sekusohlwini lwezinto ezibalulekile nsuku zonke ezimpilweni zethu ezinyangeni noma eminyakeni ezayo, lokho okusho ukuthi, ukugeza nokugcina izimaski zawo wonke umuntu ehlukile kungaba ngumsebenzi, futhi akekho noyedwa ofuna ukulahlekelwa yimaski yobuso ngoba wayilahla endleleni. Siyajabula uku ...
Ishidi le-Acrylic Lokuqedwa Komphakathi
Ngabe unakho ukuvikelwa okwanele ukugcina abafundi bakho, abasebenzi kanye namakhasimende ephephile? I-COVID-19 iyishintshile indlela umhlaba wethu obukeka ngayo. Uchwepheshe wezifo ezithathelwanayo weluleka abantu ukuthi bangakhulumi bodwa uma kufanele badle ndawonye. Amabhizinisi anethemba lokuthi ukusetha ukwahlukanisa kuzonciphisa ...
Isiphathi Sesihlanzi Sesandla
Ubhadane oluqhubekayo lwenze abahlanzayo, abahlanzayo kanye nezinto zokuhlanza indle kubalulekile njengoba abathengi bezama konke okusemandleni abo ukuzulazula kokujwayelekile futhi bahlale bephephile, ngakho-ke isibambi se-sanitizer kuhloswe ngaso ukuthi sisize ukusenza kusenesikhathi ukubagcina beseduze. Ukugcina izandla zihlanzekile kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili, ngeshwa, ...
I-Multi-functional Metal Opener Keychain
Siyajabula ukwethula umkhiqizo wethu othengiswa kakhulu: Isihluthulelo sensimbi esenzelwe izinto eziningi esingaqhutshwa nsuku zonke futhi sivikele impilo yethu. Lokhu akugcini nje ukuvula isicabha sokuthinta, ukucindezela kalula izinkinobho zekheshi, ukudonsa izibambo zedrowa nezinsika zeminyango, ukuvula iminyango ngaphandle kokuphambana ...
Isongo Se-Sanitizer Silicone Sesandla
I-sanitizer yesandla iyithuluzi lokuhlanzeka elibalulekile ngenkathi ubhadane lusenamandla futhi lusabalele. Kudingeke ukuthi siphinde sicabangele konke esikujwayele ukuthi singakuvikela kanjani ukuphepha kanye nempilo yethu, njengokugeza izandla njalo, inhlanzeko efanele kanye nokuhlanzeka kwesandla, okuyiqiniso ikakhulukazi kubantu ...
Sinikeza Imikhiqizo Yokuvimbela Ukutheleleka
Izipho ze-SJJ azigcini ngokunikeza ngemaski yobuso & umgcini wemaski, i-bandana, i-sanitizer yezandla, iphepha lesepha, kepha futhi inikeza nezinye izinhlobo ezahlukene zemikhiqizo yokuvikela ukutheleleka. Akunandaba ukuthi ufuna ama-silicone ukumelana nama-loop band, amabhola e-yoga, umata we-yoga, ibhande lesilevu elilwa ne-snoring ukukusiza uthole ...
Amasiki Wendwangu NGENANI LOKUQONDISA NGAMANANI
Ngenxa yesifihla-buso sokuhlinza siyashoda, noma imuphi umaski ungcono kunokungabikho mask obasiza ukunciphisa ukubhebhetheka kwe-coronavirus, futhi ukukhetha izifihla-buso zendwangu kungaba yisixazululo esihle. Izipho Ezicwebezelayo zinikela ngesifihla sobuso bendwangu yesitayela ngentengo eqondile yasefektri nesikhathi sokulethwa okusheshayo, okuhlukahlukene ...